ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd.
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် နှစ်ပေါင်း 30 ကျော်ကြာ လုပ်ငန်းသုံး ပိုက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန် မပြောင်းလဲသောယုံကြည်ချက်ဖြင့် Malleable သံထည်ပစ္စည်းများ၊ သံထည်ပစ္စည်းများ၊ မီးခိုးရောင်သံတပ်ဆင်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားသံမဏိပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။
အဓိကထုတ်ကုန်များ： Malleable သံပိုက်တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ၊ Tube clamps၊ Air hose couplings၊ Camlock couplings၊ ကာဗွန်သံမဏိပိုက်နို့သီးခေါင်းများ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းများ၊ Steam couplings၊ Gas meter connectors စသည်တို့။
A.1986 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 12,000 စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းကာ အလုပ်သမား ၂၀၀ ကျော်ရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော မတည်ငွေရင်းမှာ ၈ ဒသမ ၈၈ သန်းရှိပြီး နှစ်စဉ် ပို့ကုန်ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းဖြစ်သည်။
B.နည်းပညာမြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖောက်သည်များကပေးသော နမူနာများ သို့မဟုတ် ပုံများမှတစ်ဆင့် မှိုများကိုဖွင့်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်များမှတစ်ဆင့် ထုတ်ကုန်အသစ်များဖန်တီးရာတွင် ဖောက်သည်များကိုပင် ကူညီပေးသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် R&D အဖွဲ့ရှိသည်။
C.ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ သွန်းလုပ်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ သွပ်ရည်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းအထိ ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်တန့်စေသည်။
D. ပုံသွင်းနည်းအမျိုးမျိုး: လက်ရှိတွင် ထုတ်ကုန်များ၏ 90% ကို coated sand ထုတ်လုပ်မှုသို့ ပြောင်းလဲထားပါသည်။coated sand production line ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး coated sand ၏ အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး coated sand buried box casting line သည် ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးကို ပိုမိုတိုးတက်စေပါသည်။အသင့်တော်ဆုံး ပုံသွင်းနည်းကို မည်သည့်ထုတ်ကုန်အလိုက် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
E. ပုံသွန်းမျက်နှာပြင်- ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုထားသောသဲနှင့်မှိုဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်၊ အဆစ်လိုင်းမရှိ၊ မဆိုင်းမတွ၊ သဲပါဝင်မှုမရှိ၊ ထုတ်ကုန်များတွင်အက်ကွဲခြင်းမရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူတိုင်းကို စိတ်ကျေနပ်စေမည်ဖြစ်သည်။
F. ပစ္စည်းအာမခံ: on –the –spot နမူနာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း+ ပုံသွင်းပြီးနောက် ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ပစ္စည်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုအာမခံရန် နှစ်ထပ်စမ်းသပ်မှုများ။လျှပ်စစ်အပူပေးသည့် အလိုအလျောက် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာသည် ထုတ်ကုန်၏ ဇွဲနပဲနှင့် တူညီကြောင်း သေချာစေရန် မီးဖို၏ အပူများကို ညီညီညွှတ်တည်း အတိအကျ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
G. မျက်နှာပြင်ကုသမှု: ကိုယ်တိုင်အရောင် + သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသော ဆီ၊ လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်၊ ပူပူနွေးနွေး လျှပ်စီးဓါတ်ငွေ့ဖြင့် သွပ်လိမ်းခြင်း၊ ပထမလျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်နှင့် ပူပူနွေးနွေးကျဲကျဲ သွပ်ရည်ပြုလုပ်ခြင်းမတူညီသော ထုတ်ကုန်များသည် မတူညီသော မျက်နှာပြင် ကုသမှု လိုအပ်သည်၊ အကောင်းဆုံး မျက်နှာပြင် ကုသမှုကို မတူညီသော ထုတ်ကုန်များအလိုက် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
H. စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာ: ချည်မျှင်များပြုလုပ်ရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ချည်မျှင်စက်များနှင့် CNC စက်များ ရှိသည်၊ ချည်ကြိုးများသည် သတ်မှတ်ထားသော အတိုင်းအတာနှင့် ပလပ်ကိရိယာများ၏ အတိုင်းအတာအတွင်း 100% ရှိပြီး၊ ချည်မျှင်များ၏ထောင့်သည် 90°+-0.5° အတွင်းဖြစ်သည်။မြင့်မားသော ထိရောက်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို စျေးကွက်တန်ဖိုးပိုမိုရရှိစေပါသည်။
I. ကျွန်ုပ်တို့၏လက်မှတ်များကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် တူရကီအတွက် TSE၊ ဘရာဇီးအတွက် INMETRO၊ နှင့် CE၊ ISO9001:2008၊ IQNET စသည်တို့ကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။
J. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ: ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် လူသိများသော လုပ်ငန်းများစွာနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေသည်၊ ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အဓိကစျေးကွက်မှာ ဥရောပဖြစ်ပြီး၊ ပိုက်ကုပ်ကိရိယာများအတွက် အဓိကစျေးကွက်မှာ UK ဖြစ်ပြီး၊ လေပိုက်တွဲချိတ်များအတွက် အဓိကစျေးကွက်မှာ USA ဖြစ်သည်။အထူးပြု အသုံးချမှုအတွက် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများစွာလည်း ရှိပြီး ၎င်းတို့နယ်ပယ်တွင် အလွန်အကျိုးရှိပါသည်။
ဗြိတိသျှ စံနှုန်းဖြင့် ပုတီးစေ့ ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံပိုက် ကိရိယာများ
အမေရိကန်အဆင့်မီ ကြိုးတပ်၍ ပျော့ပြောင်းနိုင်သော သံပိုက် ကိရိယာများ
ဗြိတိသျှ စံနှုန်းဖြင့် ချည်ထား၍ မရနိုင်သော သံပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
DIN en10242 standard beaded malleable သံပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Air hose couplings နှင့် Double bolt hose clamps များ
Hose With Coupling, လျောက်ပတ်တယ်။, Hinged Pipe Clamp, အလူမီနီယမ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုများ, ဝက်အူဖြင့်ပိုက်ကလစ်, American Standard Fittings များ,